IBhanki yaMandla yeMagnetic
IBhanki yaMandla yokuTshaja ngokukhawuleza
Izipho Wireless Charger
I-Wireless Charger Stand
Itshaja yeBamboo kunye neMithi engenazingcingo
Isikhululo sokuTjaja isiLawuli sePS5
JoyCon for Nintendo Tshintsha
I-Shenzhen M-Queen Electronics Co., Ltd.
Yintoni enokuyenza xa iiBhanki zaMandla ziyeka ukusebenza?
Sonke siyazi ukuba ibhanki yamandla eselula ngokubanzi iya kuba nezibane ezibonisa umthamo wayo wamandla. Xa uqhagamshela ibhanki yamandla kwindawo yokukhupha umbane ukuze uyitshaje kwakhona, esinye sezibane ze-LED ngokuqhelekileyo siya kuqhwanyaza, nto leyo ebonisa ukuba ibhanki yamandla ithatha intlawulo. Njengoko umfanekiso ubonisa, nganye ye-L...
Ngaba singayithatha iBhanki yaMandla kwiNqwelomoya?
Abantu abaninzi abazi nokuba bavumelekile na ukuzisa iibhanki zamandla eziphathwayo kwiinqwelomoya okanye hayi. Ishishini lenqwelomoya liyaziwa ngokuba ngqongqo kakhulu malunga nezinto ezivumelekileyo kwibhodi, kwaye ngelishwa, iibhetri ngokubanzi kunye neebhanki zamandla, ngakumbi, azikhululwa ekulawuleni. Mna...
Kutheni ungasebenzi kunye noM-Queen Electronics?
Njengoko sibhala esi sihloko, iwebhusayithi entsha kaM-Queen isungulwe ngokusesikweni. Xa sijonga emva kule minyaka ilishumi idlulileyo, inkampani yethu ithe chu kancinci ukusuka kwiworkshop encinci ukuya kwishishini langoku, iqela lethu likhule ukusuka kwishumi elinambini ukuya kwikhulu okanye ngaphezulu ngoku, kwaye iimveliso zethu ziye zanda...
Ngaba uyayazi iSayensi enomdla yokuTshaja ngokukhawuleza kweBhanki yaMandla?
Ukunyamezela i-smartphone kwimfuno yabantu banamhlanje yokusetyenziswa kweselfowuni ayihambelani, kuba ubomi bebhetri yefowuni abukwazi ukuhlangabezana neemfuno, ngoko kufuneka ufezekise ukutshaja ngokukhawuleza kwefowuni kunye nokutshaja ngokukhawuleza kwebhanki yamandla. Ukutshaja ngokukhawuleza kukwayinto eyaziwayo...
Uyithenga njani iBhanki yaMandla, ungakhohliswa ngumthengisi kwakhona!
Kule mihla, uvile malunga nebhanki yamandla ubuncinci, abanye abafana basenokuba sele besebenzise enye okanye ezimbini iibhanki zamandla eziphathwayo. Wonke umntu unokuba nombono wokuba okukhona igcina amandla ebhankini yamandla, kokukhona inokubiza isixhobo. Ngokuqinisekileyo, kunjalo. Kodwa ngaba ifowuni yakho ye-4000mah ...